eNasha.com - अब ऊँटको सुन्दरता प्रतियोगिता
अब ऊँटको सुन्दरता प्रतियोगिता
सुलुत्त परेका लामा गोडा, गाजलु ती ठूला ठूला आँखा अनि शरीरका विभिन्न भागका लोभलाग्दा उकालीओराली- आहा !
तर पख्नुस्, यो कुनै सुन्दर युवतीको वर्णन होइन, बरु यो त इश्वरले सबैभन्दा सुन्दर वस्तु बनाउँछु भनेर बनेको जन्तुको कुरा हो । अँ, सउदी अरबमा पारम्परिक रुपमा आयोजना गरिने ऊँटको सुन्दरता प्रतियोगिताको तयारी भइरहेको छ ।
पश्चिमी सउदी अरबस्थित खतानीहरुको कबिलाले राजधानी रियाधभन्दा १२० किमि परको एकान्तिक मरुभूमि गुवेइयामा सबैभन्दा सुन्दर ऊँटको प्रतियोगिता गराउने भएका छन् ।
"लेबनानमा मिस लेबनान बनाउँछन्, हामी चाहिँ मिस ऊँट", प्रतियोगिताको वेब डिजाइनर वालिदले ठट्टा गरे ।
मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिकामा युद्धका लागि, खाना अथवा यातायातको एउटै माध्यमको रुपमा गएको चौध सय वर्षदेखि लगातार यसैको उपयोग भइरहेको छ । यो त त्यहाँको जनजीवनको साथी पनि हो । ऊँटहरु ती साना कबिलाहरुको अर्थतन्त्रको प्रमुख अंश पनि हो ।
धार्मिक मामिलामा ज्यादै कट्टर मानिने इश्लाम समुदायमा महिलाहरुको सौन्दर्य प्रतियोगिता बर्जित छ तर यो प्रतियोगितामा भने प्रायोजकहरुको पनि कुनै कमी छैन । यो प्रतियोगितामा विजेता ऊँटहरुका लागि एक करोड रियाल (अरबी रकम) पुरस्कार छुट्याइएको छ ।
प्रतियोगितामा २५० ऊँट धनीका १ हजार ५ सय ऊँटहरुले भाग लिइरहेका छन् ।
यस्तो प्रचण्ड गर्मीमा सुन्दरी ऊँटहरु निकै अधीर देखिएका छन् । मान्छेको पनि उस्तै भीड छ, सुन्दरी प्रतियोगिता हेर्न । यो भीड देखेर पनि सुन्दरीहरु निकै डराएका देखिन्छन् । दुइ दर्जन ऊँट त निकै रिसाहा पनि देखिएका छन् । आफ्ना सुन्दरीलाई शान्त पार्न त्यसका धनीहरुले बेलाबेलामा गीत पनि गाइरहेका छन् ।
अन्तिम चरणमा छानिएका सुन्दरीहरुलाई विभिन्न किसिमका जलप, लुगा र सजावटका सामानले सुसज्जित पनि पारिएको छ । "सुन्दर ऊँट छानिन नाक लामो, कान पछाडि फर्केको, घाँटी लामो, जुरो माथि उठेको र शान्त व्यवहारको हुन जरुरी छ", सुन्दरी आयोजक समितिका सुल्तान अल्खतानीले बताए । सुन्दरीहरुलाई चार विधामा छनोट गरिएका छन् । कालो मजाहिम, सेतो मजाहिम, खैरो सिल र सुफुर । अरबमा ४० विभिन्न प्रजातिका ऊँटहरु रहेको बताइन्छ ।
यस्तो पनि ! जनावर माया सुन्दरी सेलेब्रिटी बलिउड गुगल मूर्ख्याइँ भव्यता विज्ञापन मुद्दा मामिला नग्नता उपाय परिस्थिति इन्टरनेट फट्याइँ श्रीमानश्रीमती उदेकलाग्दो कीर्तिमान हलिउड